Vono olona an-kitsirano :: Vehivavy notifirin’ny zandary teo amin’ny tarehiny • AoRaha
Vono olona an-kitsirano Vehivavy notifirin’ny zandary teo amin’ny tarehiny
Nampijalian’ny zandary iray ireo olona roa voa­sam­botra sy voatazona tao amin’ ny trano nisy azy ireo, tany Ikalalao-Ambohimahasoa, tamin’ny sabotsy lasa teo.
Notifiriny teo amin’ny tarehiny ny iray teo am-pandohalihana, ka maty teo no ho eo. Nosa­ka­nan’ny lehibeny io zandary io mba tsy hampijaly ireo olona ireo saingy vao mainka notifiriny izany taorian’izay, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny Zandarimaria.
Nanome baiko mba hana­lana ny fitaovam-piadiana tany amin’io zandary io avy hatrany ireo lehibeny vao naheno ny zava-nisy. Nosamborina izy taorian’izay. Misy ny fanadihadiana atao aminy mba hanolorana azy ny Fitsa­rana haingana. Nisy ny taratasy fahazoan-dalana manenjika azy eny amin’ny Fitsarana izay nosoniavin’ny jeneraly Rava­lo­­manana Richard, Sekrete­ram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (Seg)“Efa voaofana hiaro ny zon’olombelona ny zandary. Kolontsaina ato aminay izany araka ny tarigetra hoe: “Tanindrazana sy lalàna”. Tsy misy ato aminay ny fifampiarovana amin’ny ratsy, fa izay manao hadalana dia tsy maintsy hato­lotra ny Fitsarana. Porofo mivain­gana hatramin’ny volana febroary lasa teo dia miisa enina amby roapolo amby zato ireo taratasy fahazoan-dalana manenjika zandary voarohirohy manao fandikan-dalàna eny amin’ny Fitsarana nosoniaviko. Miisa valo amby enimpolo ireo zandary naiditra am-ponja vonjimaika mba handresen-dahatra ireo zatra manao ny tsy mety mba hiova lalana”, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard.
Tsy mitsahatra manao antso amin’ny rehetra itsy tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Zandarimaria itsy. “Manentana ny vahoaka aho hahasahy hitory ny tsy mety hitany, fa izay no antom-pisian’ ny sampanasa iray natokana amin’izany ao amin’ny
Zandarimaria. Aoka hiantso ny laharana 034 12 005 25 izay manana holazaina. Manome toky aho fa haro­vana tanteraka ny tsiambaratelon’ izay manao izany. Tsara koa anefa ny manamarika fa be­tsaka lavitra noho ireo voasazy ny zandary nahazo mari-pankasitrahana, fampiakarana galona sy nahazo lelavola tato amin’ny Zandarimaria, hatramin’ny volana febroary lasa teo.
Tsy mbola nisy tato amin’ ny Zandarimaria izany hatra­min’izay. Hanaporofoanay kosa fa izay miasa tsara dia hahazo ny valin’asany ihany koa”, hoy hatrany ny Seg.
Fanendahana niharo herisetra :: Lehilahy norobaina sady novonoina teny an-dalana
Fanafihana mpandraharaha :: Tra-tehaka ireto efa-dahy nandroba volamena sy vola an-tapitrisany